विराटनगरका दुईजना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
विराटनगर, २० भदौ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका विराटनगर महानगरपालिका घर भएका दुईजना महिलाको मृत्यु भएको छ ।
उपचारका क्रममा एकजनाको विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल र एकजनाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको हो । कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलाको भने शनिबार बिहान ८ बजेतिर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन डा. लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा विराटनगर घर भएकी कोरोना संक्रमित एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका–११ की ४३ वर्षीया महिलाको शुक्रबार साँझ ६ः३० बजेतिर मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए ।